Aukus: Xaguu marayaa khilaafkii uu faransiiska ku sheegay in Mareykanka iyo UK ay dhabarka ka toogteen? - Bulsho News
Muxuu yahay Looxa 3,600 sano jirka ah ee Ciraaq dib...
Aukus: Xaguu marayaa khilaafkii uu faransiiska ku sheegay in Mareykanka iyo UK ay dhabarka ka toogteen?
Faransiiska iyo Mareykanka ayaa dadaal u galay sidii loo soo afjari lahaa khilaaf soo billowday isbuucii hore iyadoo lagu dhawaaqay heshiiska difaaca Aukus ee u dhexeeya Mareykanka, UK iyo Australia.
Heshiiska ayaa waxaa ka carooday Faransiiska ka dib markii uu meesha ka baxay heshiis qiimihiisu gaaraya $ 37bn (£ 27bn) si Australia loogu sameeyo gujisyo badda hoosteeda mara.
Paris waxay sheegtay inay ogaatay saacado uun ka hor shaacinta heshiiska.
Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Faransiiska ayaa hadda soo saaray bayaan wadajir ah oo ay ku sheegayaan in xaaladdu lagu dejiyo wada -tashiyo furan oo dhex mara xulafada.
Joe Biden iyo Emmanuel Macron ayaa taleefanka ku wada hadlayay nus saac Arbacadii. Labada hogaamiye ayaa sidoo kale ku kulmi doona Yurub dhammaadka bisha soo socota.
Carada Faransiiska waxay ahayd mid aad loo dareemay oo wasiirka gaashaandhigga Faransiiska ayaa ku tilmaamay in “dhabarka ay ka toogteen Mareykanka, UK iyo Australia”.
Si kastaba ha ahaatee, safiirka Washington ayaa hadda ku laaban doona booskiisii.
Faransiiska ayaa qaaday tallaabo aan horey loo arag oo ah in uu u yeertay danjireyaashii u fadhiyay waddamada Australia iyo Mareykanka.
Madaxweyne Biden ayaa xaqiijiyay muhiimadda ay leedahay in Faransiiska iyo reer Yurub ay ku lug yeeshaan gobolka Indo-Pacific.
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Mareykanka Anthony Blinken iyo Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Faransiiska, Jean-Yves Le Drian, ayaa la filayaa inay Khamiista maanta yeeshaan kulan laba geesood ah, sida uu sheegay sarkaal Mareykan ah.
Isbahaysigan, oo loo yaqaanno Aukus, ayaa waxaa toddobad ka hor ku dhawaaqay Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, Ra’iisul Wasaaraha UK Boris Johnson iyo dhiggooda Australia Scott Morrison.
Inkastoo aysan soo hadal qaadin Shiinaha, haddana Aukus ayaa loo arkaa dadaal lagula loollamayo saameynta Beijing ee Badda Koofurta Shiinaha.
Johnson ayaa mar dambe xildhibaannada u sheegay in heshiiska “aanan loola dan lahayn in la isugu tago” Shiinaha.
Balse Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa su’aal weydiisay Theresa May oo xilkaas kaga horreysay, taas oo ku saabsaneyd in heshiisku uu Britain ku hoggaamin karo dagaal lala galo Shiinaha.
Waxay Ra’iisul Wasaaraha weydiisay “cawaaqib xumada” ka dhalan karto isbahaysiga iyadoo Shiinuhu uu heysto Taiwan.
Johnson ayaa ku jawaabay: “UK waxaa ka go’an difaaca shuruucda caalamiga ah taasina waa talada ugu awoodda badan ee aan siin lahayn saaxiibbadeen caalamka, waana talada ugu awoodda badan ee aan siin lahayn dowladda Beijing.”
Taiwan ayaa isku heysata dal madax bannaan, balse Beijing ayaa kordhisay cadaadiska ay saarto jasiiraddaas oo ay u aragto ismaamul gobol oo dalkeeda ka tirsan.
Lovegrove ayaa sheegay in heshiisku uu yahay “iskaashiga awoodeed ee ugu muhiimsan ee ka dhaca meel dunida ka mid ah 60-kii sano ee la soo dhaafay”.